फासिज्म र राष्ट्रवाद बीच मतभेद: के नाजीवाद
आधुनिक समाजमा, सर्तहरू "नाजी", "राष्ट्रवाद" र "फासिज्म" अक्सर पर्यायवाची रूपमा कथित गर्न सकिन्छ, तर यो छैन। दुई सर्तहरू, अर्थात् नाजीवाद र तानाशाहि, इटाली र जर्मनी एक पक्ष यो युद्ध प्ले रूपमा, महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध को समयमा सोभियत संघ को विचारधारा मा पहिचान गरेका थिए। यो त जर्मन कैदी रुचि थिएन जो वाक्यांश "नाजी जर्मनी", देखियो। राष्ट्रवाद र नाजीवाद र औसत व्यक्ति वस्तुतः अप्रभेद्य गरे। तर एक्लै यी अवधारणाहरु को अर्थ, तिनीहरूले कसरी भेद भने र के फासिज्म र नाजीवाद?
फासिज्मको र Francoism
इटालियन फासिज्मको अर्थ "संघ" वा "बीम"। यो अवधि अत्यधिक दायाँ-भाग राजनीतिक आन्दोलनहरु र आफ्नो विचारधाराबाट एक सामान्यकरण हो। उहाँले पनि यस्तो यी आन्दोलनहरु द्वारा लाग्यौं कि जस्तो तानाशाही राजनीतिक regimes बुझाउँछ। हामी एक साघुँरो अवधारणा लिन भने फासिज्मको अन्तर्गत मुसोलिनी को नेतृत्व अन्तर्गत XX सताब्दी को 20-40-एँ इटाली को क्षेत्रमा कि अस्तित्व एउटा ठूलो राजनीतिक आन्दोलन चाहनुभएको।
Francoism - इटाली साथै फासिज्म पनि स्पेन सामान्य Franco गरेको को शासनकालमा उहाँले अलि फरक नाम पायो किन अस्तित्व। फासिज्मको पोर्चुगल, हंगेरी, रोमानिया, बुल्गेरिया, र पनि धेरै थियो तेस्रो-संसारमा देशहरू। तपाईं सोभियत वैज्ञानिकहरूको काम विश्वास भने, यो फासिज्म र जर्मनी मा अस्तित्व राष्ट्रिय समाजवाद गर्न श्रेय छ, तर, यो बुझ्न, हामी के नाजीवाद बुझ्न पर्छ?
को तानाशाह राज्य संकेत
कसरी अन्य तानाशाह राज्य बाट भेद गर्न? निश्चित, यो यसको आफ्नै सुविधाहरू, तपाईं अन्य देशहरूमा, एक तानाशाह अधीनमा देखि यो विभाजन गर्न अनुमति जो छ। फासिज्म को विचारधारा को मुख्य विशेषताहरु - छ:
तानाशाह दल, बारी मा, देश आर्थिक संकट को एक राज्य मा, यसबाहेक, त्यस अवस्थामा, यो राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्र को स्थिति असर भने हुँदा उत्पन्न हुन्छ।
द्वितीय विश्व युद्ध पछि, शब्द "तानाशाह" कुनै पनि राजनीतिक समूह अत्यन्तै अलोकप्रिय आफूलाई यस क्षेत्रमा उल्लेख भए लागि त, धेरै नकारात्मक connotation हासिल गरेको छ। सोभियत मिडिया फासिज्म परंपरागत सबै विरोधी कम्युनिस्ट सैन्य तानाशाही भनिन्छ। उदाहरणको रूपमा, चिली मा Pinochet को सैन्य शासकों, साथै पाराग्वे मा Stroessner को मोड।
फासिज्मको राष्ट्रवाद लागि पर्यायवाचीशब्दप्रविष्टगर्नुहोस् छैन, त्यसैले दुई अवधारणाहरु भ्रममा छैन। तपाईं बस बुझ्न आवश्यक के राष्ट्रवाद र नाजीवाद।
के नाजीवाद बुझ्न सिक्नुपर्छ भनेर अर्को शब्द - राष्ट्रवाद हो। यो अवस्थामा राष्ट्रलाई को मुद्दहरुलाई को थियोसिस अधिवक्ताओं जो आधारभूत सिद्धान्त रूपमा, नीति को क्षेत्रमा एउटा प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो राजनीतिक आन्दोलन कुनै पनि विशेष राष्ट्रियता को चासो रक्षा गर्न खोज्ने। तर यो सधैं हुँदैन। कहिलेकाहीं मानिसहरूले राष्ट्रवाद नै रगत को आधार मा, तर पनि प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र को सिद्धान्त मा मात्र होइन उत्पन्न गर्न सक्छन्।
नाजीवाद को राष्ट्रवाद कसरी भेद गर्न?
नाजीवाद को राष्ट्रवाद देखि मुख्य मतभेद तथ्यलाई मा हुन्छन् कि अन्य जातीय समूहहरू बढी सहिष्णु, तर तिनीहरूलाई नजिक आउन गर्छन छैन दोस्रो प्रतिनिधिको। साथै, तिनीहरूले माथि उल्लेख रूपमा, प्रादेशिक वा धार्मिक आधार मा गठन हुन सक्छ छन्। यो एक राजनीतिक आन्दोलन शायद, अर्थव्यवस्था contradicts विचार र बोलीको स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता पनि छ। यसलाई गुणात्मक राज्य को कानुनी रूपरेखा मा wedged गर्न सक्षम छ र सामना गर्न सक्षम छ रचनात्मक आलोचना। नाजीवाद, यदि यो एक totalitarian राज्य नींव हुनुपर्छ भनेर सजग हुनुपर्छ के बुझ्नुहुन्छ र त्यहाँ निःशुल्क विचार को लागि कुनै ठाउँ छ जो कसैले।
नाजीवाद के हो? यो अवधारणा को परिभाषा व्यापक दोस्रो विश्व युद्ध पछि संसारभरिका चिनिन थाले। यो तेस्रो रैह जो तपाईंलाई के नाजीवाद बुझ्न सक्छ प्रमुख उदाहरण छ थियो। यो अवधारणा बुझ्ने गरिन्छ अन्तर्गत राज्य सामाजिक संगठन को रूप, जो समाजवाद नस्लवाद र राष्ट्रवाद को एक चरम डिग्री संग संयुक्त छ।
नाजीहरूले को उद्देश्य शताब्दीयौंदेखि समृद्धि गर्न देश सक्छ जसले नस्ली शुद्ध, आर्य मान्छे को समुदाय को विशाल क्षेत्र एकजुट थियो।
हिटलर अनुसार, समाजवाद पुरातन आर्य परम्परा थियो। तेस्रो रैह को वरिष्ठ अधिकारीहरु अनुसार, यो आफ्नो पुर्खाहरूको लगनशील भई साधारण राम्रो विचार विकास सँगै देशमा प्रयोग गर्न पहिलो थाले थियो। साम्यवाद, उनि भन्छन्, छैन समाजवाद थियो, तर केवल एक लुकाएको मार्क्सवाद थियो।
निम्नानुसार राष्ट्रीय समाजवाद को मुख्य विचारहरू थिए:
तसर्थ, हामी के फासिज्म र नाजीवाद र राष्ट्रवाद बुझ्न सक्छौं। यी केही समानता बावजुद छन् छैन, जो पर्याय तीन धेरै फरक अवधारणाहरु छन्। तर, यो तथ्य बाबजुद, धेरै मान्छे अझै पनि तिनीहरूलाई हुन विचार गर्नुहोस्।
देवी Demeter: उनको बारेमा सबै
Irma Greze इतिहास matron
विद्वान Klavdiy Ptolemey। रोचक तथ्य
इटालियन खाना: सबै भन्दा रोचक व्यञ्जनहरु
हिटलर बारेमा रोचक तथ्य। को Fuhrer को मृत्यु
नागरिक सेवा मा Conscription
दुलहीको नयाँ आमाबाबुलाई कसरी भेट्न सकिन्छ? कारवांहरूसँग नववास्ताहरू बैठक: परम्पराहरू, परम्पराहरू
को ताप प्रणालीमा बिजुली बयलर ताराहरु। निजी घरमा को लागि बिजुली बयलर हीटिंग
औषधि "Armadine": प्रयोगका लागि निर्देशन (इंजेक्शन)
किन महिनावारी ढिलाइ छ?